डा. केसीको समर्थनमा मगर अनसन बस्दै - Everest Dainik - News from Nepal
डा. केसीको समर्थनमा मगर अनसन बस्दै
२०७५, ११ माघ शुक्रबार
काठमाडौं, माघ ११ । अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा एक युवक अनसन बस्ने भएका छन् । डा. केसीको पक्षमा कैलालीका विद्यार्थी खेम बहादुर मगर अनसन बस्ने भएका हुन् ।
उनले आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबार अगाडिको सडकमा अनसन बस्ने तयारी गरिरहेको बताए । मगरले १६ दिनअघिबाट अनसन बस्दै आइरहेका डा केसीको मागको समर्थन गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस डा. केसीलाई लिन गएकाे हेलिकप्टर जुम्ला पुग्यो
यस्ता छन् मगरका माग–
ट्याग्स: ansan, Khem Magar